Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Sideey Woyanuhu Ula Wareegeen Gobolka Gambella & Xasuuqa Kasocda.
Sida aad wararkaanagii hore kula socoteemba waxaa baryahan sii xoogaysanayay dagaalada kasocda gobolka Gambella. Dagaaladan ayaa waxay u dhexeeyeen Jabhada ka dagaalanta gobolkaas ee looyaqaano Gambella Peoples Libration Movement (GPLM) & ciidamada Woyaanaha.
Markuu dagaalkaas ay jabhadu wado wiiqay ciidamada Woyanaha ayuu gumaysiga Itoobiya sidii caadada u ahayd dab ka dhex shiday labada qabiil ee wada dagta gobolkaas ee la kala yidhaahdo Nuer & Anuak oo kasoo wada jeeda qoomiyada Nailotic ah.
Isku dhacan labada qabiil ayaa waxaa ku kala dhintay dad ka badan 100 qof dhawr boqol oo qofina way ku dhaawacmeen, waxa kaloo isku dhacani sababay in guryo badan & beero lagubo. Warku waxa kaloo uu intaas ku daray in shalay la jabsaday xabsiga ugu wayan gobolka Gambella oo dad badan lagala baxay.
Hadaba dawlada Woyaanaha oo meelo badani ay dagaalo & kacdoono ay kaga socdaan ayaa go’aankan deg deg ah qaadatay si aysan xaalada gobolku faraha uga bixin , laakiin dadka siyaasada arrimaha Itoobiya u dhuun duleelaa waxay sheegayaan inaysan xal keenayaynin la wareegida ay Itoobiya la wareegtay maamulka gobolka Gambella balse ay xaalada aagaas ka jirta ay sii murginayso.